Wasiir Beyle: "Dadaal keenii wuu mira dhalayaa, waxaanu saaranahay dhabbihii caddaa ee guusha.." - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Wasiir Beyle: “Dadaal keenii wuu mira dhalayaa, waxaanu saaranahay dhabbihii caddaa ee guusha..”
Wasiir Beyle: “Dadaal keenii wuu mira dhalayaa, waxaanu saaranahay dhabbihii caddaa ee guusha..”
Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya C/raxmaan Ducaalle Beyle ayaa sheegay in dadaalka dawladda ee horumarinta dhaqaallaha dalka uu miro dhalay, guulna laga gaaray dib u habeynta hanaanka maamulka maaliyadeed ee dalka.
Mudane C/raxmaan Ducaalle Beyle Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Somalia ayaa xusay in Soomaaliya ay cagta saartay dhabbaha Horumarka iyo guusha, isla markaana godkii madoobaa ay kasoo baxday, waxaana Shacabka Soomaaliyeed uu ku ammaanay dadaalka ay ka geysanayaan horumarka dhaqaallaha.
“Dadaal keenii wuu mira dhalayaa, guushuna way caddahay sida ku cad warbixinta ay soo saartay IMF.. Godkii madoobaa waanu ka soo baxnay, waxaanu saaranahay dhabbihii caddaa ee guusha, Hadaan nahay ummadda Soomaaliyeed waa in aan dadaalkeena sii laba laabnaa” ayuu yiri wasiirka Maaliyadda.
“Waxaan u mahadcelinayaa dhamaan shacabka soomaaliyeed oo masuul ka ah horumar walba oo aan sameyno, hadaysan canshuur bixin laheyn isla markaana aysan la shaqeyn laheyn Dowladdooda maanta ma gaari laheyn guul walba oo aanu gaarnay” ayuu mar kale yiri Wasiir Beyle.
Hay’adda (IMF) ayaa maanta soo saartay warbxin ku saabsan dhaqaalaha dalka, iyadoo dowladda Soomaaliya ku bogaadisay kordhinta dakhliga soo gala dowladda, taasi oo ku timid dadaalkii wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ay u gashey siddii muwadiniintu loogu buraarujin lahaa ahmiyadda ay leedahay bixinta canshuuraha, waxaana hay’adda (IMF) ay xustay in sanadkan 2019 uu jiro horumaro ballaaran oo dowladdu ay ka gaartay xagga daqliga.
Beyle Dhaqaalaha IMF
Dowladda Somalia oo Dalka ka eriday Wakiilka Q/Midoobay Nicholas Haysom [Akhriso Qoraal Culus]
Maxaa ka jira 10-ka Su'aalood ee Mareykanka lagu weydiinayo Ra'iisal Wasaare Kheyre..? [Caddeyn]
Ra’iisal wasaare Kheyre oo Xafiiskiisa kusoo dhoweeyay Madaxweynihii hore Xasan Sheekh [Sawirro]
Haween lagu dilay Muqdisho